France: Dumarka xijaaban oo loo diiday in ay caruurtooda usoo raacaan School-ka | shumis.net
Home » islam » France: Dumarka xijaaban oo loo diiday in ay caruurtooda usoo raacaan School-ka
France: Dumarka xijaaban oo loo diiday in ay caruurtooda usoo raacaan School-ka
Ururka hooyinka iyo sinaanta ayaa dalbaday kulan kaas oo looga hadli doono sidii ay dumarka muslimaadka ah xijaaban loola macaamili lahaa iyadoo lala simayo dumarka kale aan xijaabneen ilmahooda iskuulka usoo raaca.
Anisa Fatxi oo 33 sano jir ayaa sheegtay in ay jeceshaay in loola macaamilooda sida haweenka aan asturneen.
Bishii Marso ee la soo dhaafay ayaa wasiirka waxbarashada Luc Chatel wuxuu xukmiyay in dumarka doonaya in ay ilmahooda usoo raacaan iskuulka ama ka soo dooonaan in ay waajib ku tahay in aysan la imaan wax muujinaya ramzi diineed (astaan diin).
Wafdi la socoday Raisal Wasaaraha france ayaa sheegay in R/wasaaraha usoo dhisay koox wasiiro ah kuwaasoo dib u eegi doonta go'aamadii hore ubaxay ee ku saabsanaa arimaha xijaabka.
Xigashada warka: http://www.lefigaro.fr/
Aqriso warbixinta oo af faransiis ah
Title: France: Dumarka xijaaban oo loo diiday in ay caruurtooda usoo raacaan School-ka